June 2018 – AutoMyanmar
စတင်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ Airport Shuttle အမြန်ယာဉ်လိုင်းအသစ်
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအထိ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမကြီးအတိုင်း ပြေးဆွဲသွားမယ့် YBS Airport Shuttle ဟာတော့ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေဆိပ်ကနေ ဆူးလေအထိတစ်ဉီးကို ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ စီးနှင်းလိုက်ပါရမှာဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့ဟာ ပထမဉီးဆုံးစတင်ပြေးဆွဲတဲ့ ရက်ဖြစ်တာကြောင့် အခမဲ့ပြေးဆွဲပေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စတင်ပြေးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး YBS Airport Shuttle ယာဉ်မောင်းတစ်ဉီးက “ဒီနေ့တော့ စတင်ပြေးတာဆိုတော့ အခမဲ့ပါ။ ကျန်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ လေဆိပ်ကနေ ဆူးလေအထိ ၅၀၀ ကျပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကအခြား YBS ကားတွေလိုမှတ်တိုင် တိုင်းမရပ်ပါဘူး။ လေဆိပ်ခရီးသည်တွေအဆင်ပြေဖို့အတွက် လုပ်တာပါ။ တကယ်လို့ ခရီးသွားပြည်သူတွေက မှတ်တိုင်တိုင်းရပ်စေချင်ရင် ကုမ္ပဏီကိုလှမ်းဆက်ပါ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ကုမ္ပဏီကရပ်ခိုင်းတဲ့မှတ်တိုင်တွေပဲရပ်ပါတယ်” လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ Airport Shuttle ယာဉ်လမ်းကြောင်းမှာဆိုရင် မှတ်တိုင် ၁၈ ခုရှိနေမှာဖြစ်ပြီး လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်ချိန်တွေနဲ့ […]
Airport Shuttle အမြန်ယာဉ်လိုင်းအသစ်ဟာ ယာဉ်စီးခ ၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကြီးကနေ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးအထိ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Omni Focus ကုမ္ပဏီကနေတဆင့် သိရှိရတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ Airport Shuttle အမြန်ယာဉ်လိုင်းအသစ်ဟာ လေဆိပ်ကြီးကနေ ဘူတာကြီးအထိ ပထမဉီးဆုံးပြေးဆွဲပေးမယ့် ယာဉ်လိုင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ၈ မိုင်လမ်းဆုံ၊ ရန်ကုန်ဟိုတယ်၊ နဝဒေးရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ Sedona Hotel၊ မြန်မာပလာဇာ၊ Melia Hotel၊ Excel ဟိုတယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ရွှေတိဂုံဘုရား၊ တိရစ္ဆာန်ဉယာဉ်၊ Park Royal ဟိုတယ်၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံ၊ Shangri-La ဟိုတယ်၊ Sule Square၊ ဆူလေးဘုရား၊ ရန်ကုန်ဘူတာကြီး အထိ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်မှတ်တိုင် ၁၆ ခုမှာ ခရီးသည်အတင်အချပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ […]
Lamborghini ဟာတော့သူ့ရဲ့ 2019 Spring Summer Collection ကို Palazzo Gavazzi မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Milano Moda Uomo Fashion week မှာချပြခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2019 Spring Summer Collection တွေဖြစ်တဲ့ Huracan Performante နဲ့ Huracan RWD Coupe ကိုဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဖက်ရှင်ပြပွဲတစ်ခုလုံးကို Lamborghini အငွေ့အသက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအောင် Lamborghini ကားအရုပ်တွေ၊ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ကျီ collections တွေနဲ့ ပရိဘောဂအသုံးအဆောင် collections တွေကိုလည်း Lamborghini အငွေ့အသက်နဲ့ တစ်သားတည်းဖြစ်နေအောင် ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရဉီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက Milano Moda Uomo Fashion week မှာ Cervelo နဲ့ […]
အခု မိုးတွင်းလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ကားမောင်းရတာ ခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေမှာဖြစ်သလို အန္တရာယ်လည်း အနည်းငယ်ပိုရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို အခက်တွေမဖြစ်ရအောင်နဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး မောင်းနှင်နိုင်အောင် Automyanmar က ရိုးရှင်းပြီး အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလမ်း (၅) မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အချိန်ကိုက်ပါပဲနော် 😎).. စပါပြီ။ ၁. ဖြည်းဖြည်းမောင်းပါ ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပေမယ့် လူကြီးတွေပြောနေတာတွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာ ခဏခဏမြင်နေ/ကြားနေရတဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်များများက မေ့နေ (သို့) ဂရုမစိုက်မိ တဲ့အချက်ပါ။ ပုံမှန်ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီမှာ ဆိုရင် ကားကိုအရှိန်မြန်မြန်နဲ့မောင်းရင် ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့က လွယ်ကူပေမယ့် စိုစွတ်တဲ့မိုးရာသီမှာတော့ ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းဖို့က ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိုးရေထဲမှာကားမောင်းမယ်ဆိုရင် သူများတွေဘယ်လို အရှိန်နှုန်းနဲ့မောင်းနေတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ကားအရှိန်ကို တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင်ထားပြီးမောင်းနှင်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ၂. ကားကိုအလယ်လမ်းကနေမောင်းပါ မိုးရေထဲမှာ မိတ်ဆွေကားကို တည်နေရာယူတဲ့အခါ […]